हवाई क्षेत्रले बेहोर्‍यो १६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी :: Artha Sansar News | Economic and Political News | Nepal online News
हवाई क्षेत्रले बेहोर्‍यो १६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी
अर्थ संसार, काठमाडौं - कोभिड–१९ महामारीका कारण आन्तरिक उडानमा रहेका निजी क्षेत्रका वायुसेवा कम्पनीले १६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको बन्दाबन्दी र जारी निषेधाज्ञाको अवधिमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प हुँदा ती कम्पनीले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोरेका हुन् ।
महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले गत चैत ११ देखि साउन ६ गतेसम्म बन्दाबन्दी र त्यसयता भदौ २४ सम्म राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा निशेषाज्ञा जारी गरिएको छ । सोहीकारण झण्डै छ महिनादेखि पर्यटन तथा हवाई क्षेत्र सुनसान प्रायः छ । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माले महामारीको प्रभावका कारण हवाई सेवा कम्पनीले ६ महिनाको अवधिमा १६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नुपरेको बताए ।
उनका अनुसार ठूला वायुसेवा कम्पनी बुद्धएयर, यति एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स तथा विभिन्न १० कम्पनीका हेलिकोप्टरको व्यवसायको मोटामोटी नोक्सानीको विवरण हो । आर्थिक नोक्सानीसँगै व्यवसायसँग जोडिएका कर्मचारी मजदूरलगायतको पीडा उत्तिकै छ ।
सन् २०२० मा निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनीले २५ अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोर्ने आँकलन गरिएको छ । प्रवक्ता शर्माले बन्दाबन्दीको छ महिनाको अवधिमा बुद्धएयरले मात्रै करिब रु चार अर्ब नोक्सानी बेहोरेको छ । यती एयरलाइन्सको तीन अर्ब ६० करोड नोक्सानी भएको छ । श्री एयरलाइन्सको पनि झण्डै तीन अर्ब आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
यो बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अवधिको अनुमानित विवरण हो । हेलिकप्टर कम्पनीको व्यापार घाटा छुट्टै छ । अब, दैनिक कति व्यापार गर्थे त वायुसेवा कम्पनीले यसबाट पनि सहजै आर्थिक नोक्सानीको अनुमान लगाउन सकिन्छ । देशकै अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्धएयरले सामान्य अवस्थामा दैनिक करिब १०० उडानमार्फत ६ हजार हाराहारी यात्रुलाई ओहोरदोहोर गराउँथ्यो ।
दैनिक ७० वटासम्म उडान भर्ने अर्को प्रतिस्पर्धी यति एयरलाइन्सले चार हजारभन्दा बढी यात्रु व्यवस्थापन गर्ने गरेको थियो । धेरै उडान गर्नेमध्येको तेस्रो श्रीएयरलाइन्सले पनि दैनिक ४० हाराहारीमा उडान भर्ने गरेको थियो । वायुसेवा कम्पनीको भनाइमा सङ्घको आँकडाभन्दा आर्थिक नोक्सानी केही तलमाथि हुनजान्छ ।
उसोभए एयरलाइन्सको भनाइमा चाँही कति नोक्सानी भयो त ? बुद्धएयरका बजार निर्देशक रुपेश जोशीकाअनुसार कम्पनीले सामान्य अवस्थामा रु ६० देखि ७० करोड आम्दानी ग¥यो । तर, इन्धनमा ४० प्रतिशत कटाउँदा उसले मासिक रु १५ करोड सहजै आम्दानी गर्नेगरेको थियो । छ महिनाको इन्धनबाहेकको मात्रै हिसाब गर्दा रु एक अर्बभन्दा बढी घाटा हुन्छ ।
हेली एभरेष्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका प्रवक्ता शर्माका अनुसार सिजनमा हेली एभरेष्टले मात्रै दैनिक २० देखि २५ हजार अमेरिकी डलर कमाई गर्ने गरेको थियो । बढी उडान गर्ने सिम्रिक एयरको हेलिकप्टर र कैलाश हेलिकप्टरले सर्वाधिक उडान गर्थे । यी दुवै कम्पनीसँग समान ६ वटा हेलिकप्टर छन् । उनीहरुले दैनिक ४० हजार डलरसम्म व्यापार गर्ने गरेका थिए । सिजनमा कैलाश मानसरोवरमा मात्रै ५० करोडभन्दा बढीको व्यापार हुन्थ्यो ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी डा.धनञ्जय रेग्मीले बन्दाबन्दीको अवधिमै पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रले ३७ अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी बेहोरेको बताए । बोर्डले हालै गरेको एक अध्ययनअनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा मुलुकको पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रमा ४१ अर्ब नोक्सानी बेहोर्ने अनुमान गरेको थियो । यो चैत ११ देखि साउनमहिनासम्मको विवरण हो ।
कोभिड–१९ का कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्रका डेढ खर्बभन्दा बढी लगानी जोखिममा परेको बताइन्छ । बोर्डले तयार गरेको कोभिड पछिको पर्यटन क्षेत्रको असरसम्बन्धी अध्ययनअनुसार वैद्यरुपमा सञ्चालन भएका पर्यटन क्षेत्रमा एक खर्ब ५३ अर्बको लगानी छ । यो निजी क्षेत्रको मात्रै लगानी हो । यस्तो लगानी पर्यटन क्षेत्रका होटल, एयरलाइन्स, रेष्टुराँदेखि पदयात्रा पर्वतारोहण, जलयात्रालगायत छन् । कोभिडको मख्य प्रभव पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । यो क्षेत्रमा दुई लाख ७३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, विश्व पर्यटन सङ्घले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा १० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै सरकारी तथ्याङ्कले पनि पर्यटन क्षेत्रमा छ लाख हाराहारीले रोजगारी पाएको विवरण छ । तथापि बोर्डले हालै गरेको द्रुत अध्ययनबाट झण्डै तीन लाखले पर्यटनमा प्रत्यक्षरुपमा रोजगारी पाएको उल्लेख गरेको छ । सरकारले कोभिड–१९ का कारण थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत एवं पुनःरुत्थानका लागि चालू आवको बजेटमा एक खर्बको पुनःरुत्थान कर्जाका साथै ५० अर्बको पुनःरुत्थान कोषको व्यवस्था गरेको छ । रासस
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्वारा विशेष सभा आह्वान, के-के छन् प्रमुख एजेण्डा ?
एनआरएन लघुवित्तका संस्थापक शेयरधनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !
श्रमज्योति बचत तथा ऋण सहकारीले बोलायो साधारणसभा, पारित हुने यस्ता छन् एजेन्डा
हाईड्रोपावरमा लगानी गर्ने हो ? युनाइटेड इदी मर्दीको आइपिओ आजदेखि बिक्री खुल्ला
१ नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो सभा, यस्ता छन् छलफलका मुख्य एजेन्डा
२ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गर्दै पुनर्बीमा कम्पनी
३ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकद्वारा विशेष सभा आह्वान, के-के छन् प्रमुख एजेण्डा ?
४ छिमेकी लघुवित्तका संस्थापक शेयरधनीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना !
५ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ४ अर्बको ऋणपत्र निष्कासन गर्ने
६ सहकारीको ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता
७ नेप्सेमा २ कम्पनीको शेयर सूचिकृत, कुनको कति कित्ता ?
८ अब खाद्य सामग्री अनलाइनबाट किनमेल गर्दा खल्ती वालेटबाटै भुक्तानी गर्न सकिने !
९ बुधबार देशभर ११ सय ७३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, उपत्यकामा कति थपिए ?
१० हिमालयन डिष्टिलरीका पूर्व सञ्चालक परे धितोपत्र बोर्डको कारबाहीमा !